Kiisas cusub Covid-19 oo laga helay dalka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Kiisas cusub Covid-19 oo laga helay dalka
Kiisas cusub Covid-19 oo laga helay dalka
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah shaacisay dad fara badan oo laga helay cudurka halista ah ee Coronavirus, kuwaasi oo ku kala sugan deegaanno ka tirsan dalka.
Warbixin ay soo saartay Wasaaradda Caafimaadka dowladda ayay ku sheegtay in 5-tii maalin ee lasoo dhaafay cudurka laga baaray 2,704 qof, isla markaana laga helay 157 qof oo kamid dadkaas, kadib markii baaritaanno kala duwan lagu sameeyay.
Tirada dadka ugu badan ee laga diiwaan-geliyay cudurka maalmihii ugu dambeeyay ayaa ku sugan deegaannada Puntland, waxaana halkaas laga diiwaan-geliyay 157 qof uu ku dhacay COVID-19.
Sidoo kale Warbixinta Wasaaradda ayaa lagu sheegay in deegaannada maamulka Somaliland laga helay 20 qof, halka G/Banaadir laga helay 2 ruux iyo deegaanada Galmudug oo laga diiwaan-galiyay 1 qof, waxaana dhammaan 157 ee laga helay Cudur rag ah 98, halka 59 ay yihiin dumar.
Previous articleSicir barar ka jira Puntland iyo kor u kac ku yimid sarifka qalaad
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo booqasho laba maalin uga bilaabatay Ereteriya